Puntland iyo Galmudug oo ku dhaartay in ay kordhin doonaan iskaashigooda dhinaca ammaanka - Sabahionline.com
Puntland iyo Galmudug oo ku dhaartay in ay kordhin doonaan iskaashigooda dhinaca ammaanka
Wakiillo ka kala socda Puntland iyo Galmudug ayaa ku kulmay saldhigga bilayska ee Galmuug Isniintii (27-kii Augusut) si ay kor ugu qaadaan howl-gallada ammaanka ee ka dhexeeya labada maamul goboleed, sidaana waxa sheegay Garowe Online.
Bilayska Puntland oo xirxiray rag hubeeysan oo weeraray wafdi ka socda Turkiga
Bilayska Galmudug oo DFKMG ah ka codsaday tababbar
"Puntland iyo Galmudug ayaa kulmay si ay uga wadahadlaan mustaqbalka oo laga gudbo wixii tagay; waxa naga go'an in aan wada-shaqayn la nimaanno si loo sugo ammaanka gobolka," ayuu yiri Guddoomiyaha Gobolka Mudug ee Puntland Maxamed Yuusuf Jaamac.
Kulanka ayaa waxa uu ka dhacay gaari lag asoo soo xaday waqooyiga Gaalkacyo oo ay warkiisa gudbiyeen bilayska Puntland. Bilayska Galmudug ayaa soo helay gaariga dabadeedna u soo celiyay milkiilihiisii.
"Waxaan jeclahay in aan u mahad celiyo wakiillada Puntland ka socda ee na soo booqday waxan sidoo kale doonayaa in aan uga bilayska Galmudug uga hambalyeeyo shaqada adag ee ay qabteen," ayuu yiri Guddoomiye Ku-xigeenka gobolka Mudug, ee dhinaca Galmdug Aways Cali Saciid. "Waxan rumaysanahay in haddii aan si wadajir ah u shaqeeyno waxannu si wayn u horumarin karnaa ammaanka gobolka."
August 29, 2012 @ 07:16:54AM
Midnimadu waa awood, kala qaybsanaantuna waa diciifnimo, wada shaqayntuna waa wax faa’ido leh, waxaanan idinku hambalyaynayaa arrinkaas, waana fikrad wacan.